The Algarve, fitsangatsanganana amin'ireo morontsiraka tsara indrindra | Vaovao momba ny dia
Ny Algarve, mandeha mamakivaky ny morontsiraka tsara indrindra
Susana Garcia | | General, tora-pasika, Portiogaly
Amin'izao fotoana izao dia tokony hieritreritra ny amin'ny toerana fialantsasatra manaraka isika, satria efa akaiky ny Paska. Toy ny amin'ity karazana fitsangatsanganana kely ity dia tsy te-handeha lavitra isika, afaka mifidy ny hitsidika ny firenena mifanila aminy isika, mahita ny morontsirak'i Portugal, ary indrindra ny iray amin'ireo faritra mpizahatany sy mahafinaritra indrindra ao aminy, ny Algarve.
Ao amin'ny Portiogey Algarve misy hatramin'ny 240 kilometatra ny morontsiraka, miaraka amoron-dranomasina mahavariana sy miovaova be. Manomboka amin'ny morontsiraka feno serivisy sy olona amin'ny vanim-potoana avo ka hatrany amin'ny zoro mangina sy mangina indrindra. Na izany aza, tsy maintsy ao an-tsaina fa na dia am-polony taona vitsivitsy lasa izay ity virjiny ity ho an'ny fizahan-tany, dia toerana itodiana mahazatra ankehitriny. Izany no antony ilazanay aminao hoe iza avy ireo morontsiraka izay tokony tsy ho tarainao.
5 Marinha Beach
6 Praia manao Barril
Io no iray amin'ireo torapasika malaza any amin'ny faritr'i Lagos, ary malalaka dia malalaka izy io, amin'ny faritra iray izay voafetra ny torapasika noho ny fisian'ny hantsana. Ity dia iray amin'ireo mampiavaka azy lehibe indrindra, ary izany dia ny faritra feno fasika dia eo anelanelan'ny famolavolana vatolampy mahafinaritra izay manome endrika miavaka azy.
Tsy maintsy midina tohatra vitsivitsy ianao, ary ny marina dia na eo aza izany dia feno olona tokoa amin'ny vanim-potoana avo. Ao anatin'izany dia misy karazana serivisy rehetra, manomboka amin'ny bara amoron-dranomasina ka hatrany am-pandriana, na dia misy aza voahodidina hantsana ny atmosfera izay miaina dia milamina ary voajanahary tokoa. Ankoatr'izay, milamina ny rano, zavatra tsy ampy amoron-dranomasina Portiogey rehefa misokatra ho an'ny ranomasina izy ireo, ary afaka mitsoraka sy milomano.
Akaik'io Dona Ana beach, amin'ny faritr'i Lagos, ity morontsiraka mahatalanjona ity. Eny, mihoatra ny morontsiraka, dia faritra misy vato miforona izay mamorona andohalambo volamena ao anaty ranomasina. Ny zavatra mahaliana amin'ity toerana ity dia ny fidinana amin'ny tohatra amin'ny hantsana mankany amin'ny seranana kely iray izay manofa sambo. Toy izany no ahitanao ny fiorenan'ny vato avy eo akaiky dia gaga amin'ity fisehoan'ny natiora noforonin'ny fikaohin'ny rano sy ny rivotra ity. Voalaza fa na ny endrika sasany toy ny mofomamy fitsingerenan'ny andro nahaterahana aza dia mety ho hita.
Tsara ity tora-pasika dia eo akaikin'i Sagres, akaikin'ny Cabo de San Vicente. Azo tohanan'ny tohatra midina amin'ny hantsana, avy amin'ny fiantsonan'ny fiara. Manana coves roa izy, ny iray amin'izy ireo dia tsy azo idirana afa-tsy amin'ny onja kely, ary azo antoka fa izany no milamina indrindra, saingy tsy maintsy fehezinao ny onja mba tsy hianjera amin'ny lafiny ilan'ny vatolampy. Ao amin'ny cove lehibe no misy ny bara amoron-dranomasina. Eto dia ilaina ny mijanona mandra-pilentiky ny masoandro, iray amin'ireo mahavariana indrindra hita.
Ity morontsiraka ity dia Any atsinanan'i Albufeira, ary any amin'ny tanàna fanjonoana tranainy iray izay tsy mipetraka amin'ny fizahantany izao. Ity anarana amoron-dranomasina ity dia mahazo an'io anarana io noho ny loharano miboiboika izay misondrotra eny amoron-dranomasina sy ao anaty rano, ary azo ankasitrahana bebe kokoa amin'ny fiakaran'ny rano. Satria morontsiraka be mpizaha tany izy io, izy io koa dia manana ny serivisy rehetra, ary ny fidirana eo am-pototry ny morontsiraka izay misy ny trano fisakafoanana ka hatrany amin'ny kafe sy fisotroana.
Ity dia iray amin'ireo morontsiraka mahatalanjona ao amin'ny Algarve, izay nosokajian'ny Michelin Guide iray amin'ireo tsara tarehy indrindra any Eropa, ary tsy ho an'ny kely kokoa. Izy io dia iray amin'ireo morontsiraka amin'ity faritra ity izay misy vatosoa mahatsikaiky sy am-boalohany misy andohalambo. Amin'ny vanim-potoana avo dia feno mpizahatany te-hitsidika ny iray amin'ireo morontsiraka malaza indrindra, noho izany dia tsara kokoa ny mandeha amin'ny fotoana hafa toy ny Mey na Jona, rehefa afaka mankafy tanteraka ny natiora amoron-dranomasina, ny hantsana ary ny rano mangarahara mangarahara.
Praia manao Barril
Ity iray ity morontsiraka mahafinaritra dia any Tavira, tanàna tsara tarehy misy tantara maro, izay ahafahantsika mankafy ny tanàna taloha. Ankoatr'izay, eto amin'ity morontsiraka ity dia lasa ny lasa toy ny tanàna fanjonoana natokana ho an'ny jono tuna. Ny iray amin'ireo zavatra nahasarika ny sain'ny olona indrindra rehefa tonga teny amoron-dranomasina dia ny fasana lehibe misy vatofantsika goavambe hita eo amin'ny faritry ny dongona, izay miteraka fanontaniana maro eo amin'ireo mpizahatany. Izy ireo dia tavela ho vavolom-belona ho an'ny fanjonoana amoron-dranomasina, ary manome azy io hatsaran-tarehy ambanivohitra sy an-dranomasina. Etsy ankilany, ny tranon'ny mpanarato kely taloha dia nohavaozina mba hipetrahana trano fisakafoanana sy fivarotana, noho ny firongatry ny fizahan-tany. Amin'ny ankapobeny, ity morontsiraka ity dia malalaka sy miavaka amin'ny fasika madio sy madio ary rano madio.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Ny Algarve, mandeha mamakivaky ny morontsiraka tsara indrindra
Abidia mpizahatany (II)
Lipton's Seat, ny dite oliva any Sri Lanka